Indlela yokwenza Igumbi lokuhlambela liBonakale likhulu ngaphandle koTshintsho lweZakhiwo - Izithuba Ezincinci
Indlela yokwenza Igumbi lokuhlambela liBonakale likhulu ngaphandle koTshintsho lweZakhiwo
THENGA NGOKU I-B & Q / GoodHome Imandra kunye neBeloya igumbi lokuhlambela
Ukuba uceba ukuhlaziya, ukudibanisa i-looo yangasese kunye negumbi lokuhlambela okanye ukuyihambisa kwigumbi elingasetyenziswanga ngumbono olungileyo. Nangona kunjalo, ukuba ukuwisa iindonga kunye nokutshintsha ubeko lwekhaya lakho akuyona inketho, zikho ezinye iindlela onokwenza igumbi lokuhlambela lizive likhulu.
USallie Chater, umseki kunye nomlawuli wenkampani yakhe yoyilo lwangaphakathi, Ngaphakathi kwi-58 , ucacisa njani.
Ukukhetha isitya esingenanto esingenaludonga kuya kuqinisekisa ukuba kukho indawo ebonakalayo ebonakalayo, eya kuthi ngokukhawuleza yenze igumbi live likhulu. Kwaye kuyinyani ukuba ukhetha ibhafu yokuhamba ngokukhululekileyo emilenzeni, kunokuba ikhethwe ngokupheleleyo. Unokuyinyusa into wow ngebhafu yentsimbi. I-Chrome, i-nickel kunye nobhedu zonke zikhangeleka ziyamangalisa kwaye umphezulu wazo ocwebezelayo uzakubonisa iithayile zomgangatho, uncede ukwenza umfanekiso-ngqondweni wesikwere esingapheliyo!
Sebenzisa iithayile ezifanayo kuzo zonke iindonga kuya kunika umphumo ongenamthungo oya kuthi uncede igumbi libukeke likhulu. Utshintsho olubonakalayo oluncinci phakathi kweemveliso ezikhoyo, olulula, olucocekileyo nolwandayo ngakumbi kwigumbi liya kuziva. Elinye iqhinga lokusebenzisa i-tile kukusebenzisa 'ishawa yangaphambili' okanye itreyi yegumbi lokumanzi kwaye uyigubungele kwiithayile ezifanayo njengeendonga. Oku akuyi kudala kuphela isiphelo esiphakamileyo, isikimu sobunewunewu kodwa kuya kukhohlisa iliso ekuboneni indawo enkulu.
Ca 'Pietra Lily Pad ithayile
Iipili kunye neendawo ezibonakalayo
Ukusetyenziswa ngobuchule kwezipili kungenza umohluko omkhulu kwindawo encinci. Musa ukuzikhawulela ekubeni nento encinci ngaphezu kwesitya-cinga kakhulu! Unokugcwalisa lonke udonga ngasemva kwesinki okanye ibhafu ngesipili esine-bespoke, esiya kuvula igumbi kwaye senze indawo egxile kakhulu kuyo. Okokugqibela, iishelufa ezifakiweyo zilungele ukubonisa iimveliso ezintle. Kananjalo baya kubuyisa ukukhanya ejikeleze igumbi kwaye basebenzise elona thuba linalo!
Yenza imiboniso yeekhonteyina ezimibalabala unyaka wonke
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Iindlela ezili-10 zokuhombisa ialcove
Izihlalo zothando ezingama-21 zilungele iindawo ezincinci
Iindlela ezi-3 zobuchwephesha zokwenza uninzi lwegadi encinci ye-B & Q isungula ukwahlulahlulwa kwegumbi seemodyuli
Imithi yeKrisimesi engama-25 ilungele iindawo ezincinci Ngaphambi & Emva: i- $ 300 yokwenza igadi encinci
Isikhokelo sokugqibela segadi yebalcony
Imithi emi-5 efanelekileyo kwizitiya ezincinci
Ukuhombisa ikhaya eliqeshiweyo ngaphandle kotshintsho olusisigxina
Yintoni eyenza umphandle wekhaya lakho ubonakale umdala?
Indlela yokwenza igumbi libukeke likhulu
Uyenza njani ingca yakho ibonakale intle
Iindlela ezili-10 zokufumana igadi yoyilo (ngaphandle kwexabiso lentengo)
Iingcebiso ezi-4 zezindlu zangasese ezincinci
imibala yeefestile ezinkulu
ichibi elikhulu leephuli zehlabathi
iingcinga zoyilo kwigumbi lokuhlala